Choputa Faedo de Ciñera, ohia beech mara mma | Akụkọ Njem
El Faedo de Ciñera bụ aha enyere n’ọhịa beech mara mma dị na obodo León, n'etiti obodo Villar del Puerto na Ciñera de Gordón. A gụnyere oke ohia a na mpaghara nchekwa Alto Bernesga Biosphere. Afọ ole na ole gara aga, Mịnịstrị na-ahụ maka gburugburu ebe obibi nyere ya ihe nrite maka oke ọhịa dị na Spain, nke na-enye anyị echiche banyere ọgaranya na ịma mma ya.
Obere banye ebe mara mma dika Faedo de Ciñera Ọ na-akuziri anyị na njem ekwesịghị ilekwasị anya naanị n’ịchọpụta obodo ukwu ma ọ bụ ebe ama ama, kamakwa ịchọ n’etiti obere ebe. Ọhịa a na-enye anyị ọmarịcha ngwụcha izu ụka na-aga njem njem na mpaghara okike.
1 Ndụmọdụ iji hụ Faedo de Ciñera
2 Ikzọ njem
3 Mgbe ị gara ileta Faedo de Ciñera
Ndụmọdụ iji hụ Faedo de Ciñera
Mpaghara a nke ọhịa nwere ụzọ ụkwụ hiking na ha adighi oke obosara ma obu tinye oke oke. Ọ bụ ya mere na ị gaghị eme nkwadebe dị ukwuu. Ka o sina dị, mgbe anyị na-aga n'ụzọ ụfọdụ, ọ ga-adị mma mgbe niile iburu akpa na obere nri na mmiri, ọkachasị ma anyị soro ụmụaka. Na mgbakwunye, anyị nwere ike iburu akpa iji zere ịhapụ ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe mkpofu na mpaghara ahụ. Ọ dị mkpa iyi akwa kwesịrị ekwesị maka ịgagharị. Ekwesiri icheta na oburu na anyi gaa ezigbo ihu igwe na ala ahihia di omimi dika ndi a, o nwere ike itu oyi. Ya mere, ọ kacha mma mgbe niile iweta ihe na-ekpo ọkụ naanị ma ọ bụrụ. Akpụkpọ ụkwụ dị mma nke nwere njide dị mma dị mkpa, n'ihi na oke ọhịa ndị a na ebe ha nwere mmiri mmiri nwere ike ịnwe ebe nwere ohere ka njọ ma ọ bụ ebe ị nwere ike ịmịcha. Na-asọpụrụ gburugburu ebe obibi ma na-echebara ihu igwe na oge ọkụ, anyị ga-akwadebe onwe anyị iji nwee ọ enjoyụ pụrụ iche. Ọ bụrụ na anyị ewetara nri anyị nwere ike inwe pịkụl mara mma na mpaghara ebe tebụl dị n'akụkụ oke ọhịa.
Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ ime njem njem site na Faedo de Ciñera, ị nwere ụzọ ọzọ. Rozọ ndị a malitere n’obodo Ciñera de Gordón, bụ́ obodo dị ihe dị ka kilomita iri anọ site na León. Si ebe a ụzọ gasị nwere ike ịbụ obere, nke a di na nwunye nke kilomita ma ọ bụ ibu, nke ruo 11 kilomita, dabere na ihe anyị chọrọ ime. Thezọ dị ogologo bụ nke ndị na-egwuputa ihe na Villar del Puerto ji eme ihe iji nweta ebe a na-egwupụta Ciñera. Na mbụ, ịnwere ike iru mpaghara na tebụl na oche na-adịghị mfe ebe ị nwere ike ịkwụsị iri nri. Gafere mpaghara a mgbe ị na-alaghachi, yabụ enwere ọtụtụ ndị na-echekwa nri maka mgbe ụzọ ahụ gwụchara.
Ọ bụrụ na anyị gafere n'okporo ụzọ ahụ, anyị na-aga n'ihu site na ala ahịhịa na mgbe anyị gafere akwa mmiri na mpaghara ụfọdụ nwere mmiri anyị rutere n'ọhịa beech, nke bụ otu n'ime ebe kachasị mma. Zọ kachasị pere mpe na-akwụsị ebe a, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ọ dị anyị ka ọ nwere ike ịga n'ihu nyocha ebe ahụ n'ihi na ụzọ ahụ na-aga n'ihu. Ọzọkwa, emesịa anyị ga-ahụ ihe ndị ọzọ na-atọ ụtọ n'ọhịa. Otu n'ime ha bụ Arroyo del Villar nke na-agafe n'oké ọhịa ma jupụta ụda ihe niile na ụda mmiri nke kpokọtara. Ga-akpachara anya na mmiri mmiri iji zere ihe ọghọm. Enwekwara ebe enwere ike inweta ya na okwute ebe ị gha aghaghi ikpachara anya mana akuku a nke oke ohia mara mma nke ukwuu ma okwesiri ime uzo nile. N'aka nke ọzọ, anyị nwekwara ike ịhụ beech kacha ochie n'oké ọhịa a na-ahụkwa dịka otu n'ime ndị kacha ochie na Spain. Akpọwo beech a Fagus ma kwenye na ọ dị ihe dị ka afọ 500.
Mgbe ị gara ileta Faedo de Ciñera
Ọhịa a na-enye anyị ebe ọdịda ala n'afọ niile. Ọ bụ ezie na oge okpomọkụ bụ oge dị mma n'ihi ihu igwe dị mma nke ga-eme ka anyị nwee picnic enwere oge ndị ọzọ ọ nwekwara ike ịmasị. Oge mgbụsị akwụkwọ bụ oge mgbụsị akwụkwọ ọhịa beech na-etinye aka na ihu ya kachasị mma na mgbe otutu ndi mmadu biara ichoputa ima nma nke ebe a. Agba ndị a pụrụ ịhụ na osisi ndị a n'oge mgbụsị akwụkwọ na-eme ka mpaghara ahụ yie ebe akụkọ ifo, ebe anwansi kpamkpam na-enye anyị ezigbo oge iji mee ụzọ ụkwụ. Ọ ka mma izere nleta n'oge oyi n'ihi na enwere ike izo mmiri ma nwekwuo iru mmiri ma nwekwaa ike ịnweta, na mgbakwunye na oyi. Ọ bụ ya mere oge kachasị mma bụ oge opupu ihe ubi, mgbe oke ọhịa dị n'ịma mma ha niile, ma ọ bụ n'oge mgbụsị akwụkwọ, mgbe ha nwere agba pụrụ iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Faedo onye Ciñera